ဆောင်းပါးများ | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 26
Category Archives: ဆောင်းပါးများ
ရင့်ကျက်သူတွေ ဂရုမစိုက်တော့တဲ့ အရာ (၁၀) ခု
April 21, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါ အရေးပါတာနဲ့ မပါတာကို ခွဲခြားသိသွားပါပြီ။
အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတစ်ခု ရောက်ရှိသွားချိန်မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြောက်ရွံ့ခဲ့တာတွေ၊ စိုးရိမ်ခဲ့တာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ ရင့်ကျက်လာတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ရင့်ကျက်သွားသူတွေက အရေးမပါတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ စိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို အာရုံထဲ မထားတတ်ကြတော့ပါဘူး။
၁။ လူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ လူဆိုတာ သူတို့ ထင်ချင်တာထင်ကြတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပြီ။
၂။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ ဖက်ရှင်စည်းမျဉ်းတွေကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ ကိုယ်ဝတ်ချင်တာကိုပဲ ဝတ်တယ်။
၃။ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်း စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။
၄။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ relationship တွေကို အဆုံးသတ်လိုက်ဖို့ ဝန်မလေးတော့ဘူး။
၅။ အမှားတွေကို တွေးတွေးပြီး နောင်တရမနေတော့ဘူး။
၆။ လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေဖို့ ကြိုးစားမနေတော့ဘူး။
၇။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ Like ရတာတွေ မရတာတွေ၊ ကိုယ့်ကို Unfriend လုပ်သွားတာတွေကို အပေါ် ခံစားမနေတော့ဘူး။
၈။ ပြည့်စုံလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် မရှိလည်း အရေးမစိုက်တော့ဘူး။
၉။ နာမည်ကြီးတံဆိပ်သုံးမှ လူရာဝင်တာတွေ ဘာတွေ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။
၁၀။ ကိုယ့်ကို အလေးမထားသူတွေကို အဖက်မလုပ်တော့ဘူး
ကောင်းလွန်းအားကြီးလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ။==
“အမေ သိပါတယ်သားရယ်… အဲ့ဒါကြောင့် လမ်းထိပ်က ဒေါ်ကျော့ ဆီမှာ
တောင် အမေ အင်္ကျီ င်္အပ်ထားပါသေးတယ်…အမေ့ မှာ အင်္ကျီ အသစ်မရှိတော့ဘူးလေ…”
“ဟင်..အမေ ကလိုက်မလို့ လား… အိမ်မှာ အဖေ့ကိုစောင့်ဖို့ လူမရှိဘဲဖြစ်မှာပေ့ါ…. ”
မိခင် ဖြစ်သူမှာ သားရဲ့ တဇွတ်ထိုးဆန်တဲ့ စိတ်ကိုသိလို့နာကျင်မိတဲ့ စိတ်
“အေးပါကွယ်…သားလေးသဘောပါ…သားလေး ဘွဲ့ ရရင်ဘဲအမေတို့ ကျေ
နပ်ပါတယ်…အမေ အိမ်မှာဘဲ သားအဖေကို စောင့်နေလိုက်ပါ့မယ်…”
ထက်ပို ဂရုစိုက်ပြင်ပေးထားတယ်… ဘွဲ့ သွားယူမှာဆိုတော့ ဗိုက်နာမယ့်အစားအစာတွေ မဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်လို့ ပေ့ါ….
“မစားတော့ဘူးအမေ သားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းနားက စားသောက်ဆိုင်မှာ ချိန်းထားတယ်…အဲ့ မှာဘဲစားတော့မယ်… ”
ဒီလိုနဲ့ သားဖြစ်သူက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရောက်တော့ လူတောင်တော်တေ်ာစုံနေပြီ …နာရီကိုကြည့်တော့လည်း ဘွဲ့ ယူဖို့ အချိန်က
တစ်နာရီလောက်လိုသေးတယ်ဆိုတော့ မနက်စာစားဖို့ မှာလိုက်တယ်…
မိဘ ခေါ်လာတဲ့သူနဲ့ ပေ့ါ…အဲ့ အချိန်မှာ သူ့ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က
ကလည်း ပြန်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်..ဒါပေမယ့် ညာဘက်လက်နဲ့ တော့မဟုတ်ဘူး ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ဆိုတော့
ကောင်လေး မှာ ထူးဆန်းပြီး ညာဘက်လက်ကို ကြည့်လိုက်မိတယ်…
ငါးေ၇ာင်းပြီး ကျောင်းထားခဲ့ တာကွ….ဒါနဲ့ မင်းအမေနဲ့ အဖေ ရောမတွေ့ ပါလား…”
အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ တံခါးကြီးဖွင့်ထားတာတွေ့ တော့ အမေ နဲ့ အဖေ ခန်းကို ၀င်ဖို့ လုပ်တုန်း အခန်းထဲကအသံကြားမိတယ်…
“ဖေကြီး ရေ သားကတေ့ာ ဘွဲ့ သွားယူပြီတော့…. ကျွန်မ ကတော့ ဘွဲ့ ခန်းမ
ကိုမလိုက်ရလည်း သားနဲ့ အတူတူရှိနေသလို အိကျီ င်္အသစ်တွေဝတ်ထားတယ်…ရှင့်ကိုလည်း တိုက်ပုံ အသစ်ဝတ်ပေးထားတာတွေ့ လား…”
အမေ ကငါ့အပြစ်ကို မသိသလိုပါလား…..
“အဖေ နဲ့ အမေ ”
နာမည်ကြီး ရန်ကုန် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်သမိုင်း
၁၈၅၂ခုနှစ်က နေ၁၈၅၃ခုနှစ်အတွင်းပုဂံမင်းလက်ထက် မှာ အင်္ဂလိပ်_မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးရန်ကုန်အပါဝင် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဟာ ဗြိတိန်လက်အောက် ကျရောက်သွားခဲ့တယ်။
အင်္ဂလိပ်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အတွက် မခံနိုင်လို့ထချသူတွေ၊သောင်းကျန်းသူတွေ စတဲ့သူတွေရဲ တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲငယ်တွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ရတယ်။
ဒီအခါ အင်္ဂလိပ်ဟာ အုပ်ချုပ်ရေးငြိမ်ဝပ်ပိပြားဖို့အတွက် အကျဉ်းထောင်စနစ်ကို စတင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကတစ်ဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် အခြေချဖို့ ဂတ်တွေ၊ရုံးတွေ၊ထောင်တွေကိုစတင်တည်ထောင်ပါတယ်။
၁၈၆၄ခုနှစ်မှာ အကျဉ်းထောင်ဌာနကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဆေးမင်းကြီးလက်အောက်မှာ ထားရှိအုပ်ချုပ်စေတဲ့အပြင် မြို ရွှာသန့်ရှင်းရေးနဲ့ ကျောက်ဆေးထိုးဌာနတွေကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းကြီးကြပ်စေခဲ့တယ်။၁၈၇၂ခုနှစ်မှာ ယခင်ဆေးမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေရာကမှ အကျဉ်းထောင်ဌာနကို ထောင်မင်းကြီးသီးသန့်ခန့်ထားပြီး အုပ်ချုပ်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်မှာခေတ်မီအကျဉ်းထောင်စနစ်မရှိခဲ့ရာကနေ ၁၈၆၁ခုနှစ်မှာတော့ ရန်ကုန်ထောင်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာမှာသာမက အရှေ့ တောင်အာရှမှာပါအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အင်းစိန်ထောင်ကြီးကို သီပေါမင်းပါတော်မူကြီး၎နှစ်အကြာ ၁၈၈၉ခုနှစ်မှာ စတသ်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အကျဉ်းထောင်မတည်ဆောက်မီ အင်းစိန်မြို့နေရာဟာ ရွှာငယ်သာသာမျှသာရှိပါသေးတယ်။အင်းစိန်မြို့ကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာ ယခု ရွှာမရွှာကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ရွှာမရွှာကြီးတစ်ဝိုက်သစ်တောကြီးတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးမင်္ဂလာဒုံတောနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ယခုလက်ရှိမင်္ဂလာဒုံကို အထက်မင်္ဂလာဒုံဆိုပြီးတစ်မျိုး၊ယခု အင်းစိန်မြို့နေရာကို အောက်မင်္ဂလာဒုံဟူ၍ တစ်နည်းေ ခ်ါဝေါ်ကြတယ်။အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကို ၁၈၈၉ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၁၈၉၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတယ်။
အကျဉ်းထောင်မတည်ဆောက်ခင် ယခုအင်းစိန်ထောင်ဝင်းကြီးတည်ရှိရာမြေနေရာမှာ သရက်ခြံ၊ကနစိုခြံ၊ပိန္နဲခြံကြီးတွေအုပ်ဆိုင်းနေပြီး ဗြိတိသျှအစိုးရ က မြေတွေကိုလျှော်ကြေးပေးပြီးသိမ်းကာ အကျဉ်းထောင်ဧရိယာကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။အင်းစိန်ထောင်ကိုအုတ်ရိုး၂ထပ်တည်ဆောက်ပြီးတဲ့နောက် ထောင်အတွင်းမြေညှိပြီး အိပ်ဆောင်တွေဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန် ရန်ကုန်ထောင်ကို အသုံးပြု နေပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်ထောင်က၆လအောက်အပြစ်ကျတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကိုခေါ်ယူပြီးအင်းစိန်ထောင်တည်ဆောက်ရေးမှာ ခိုင်းစေခဲ့တယ်။အလုပ်သနားအကျဉ်းသား၄၀၀ခန့်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအုတ်ရိုးကြီး၂ထပ်အတွင်း မှာ အဆောက်အဦိးတွေမပြီးစီးသေးတဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေဟာ ဒီအတိုင်းနေထိုင်ပြီးအိပ်ကြရတယ်။
အိပ်ဆောင်၆လုံးတည်ဆောက်ရာမှာ အကျဉ်းသားတွေအပြင် ပြင်ပကအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဗိသုကာပညာရှင်တွေဦးစီးပြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ထောင်ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ အကျဉ်းသားလုံခြုံ ရေးအတွက်အင်းစိန်ထောင်အရှေ့ ဘက်နေရာကို အဆောက်အဦးတန်းလျားတွေဆောက်ပြီး ပုလိပ်တွေကိုထားပြီးစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်က တွဲဘက်ထောင်ခေါ် ယခုသီးသန့်ထောင် မဆောက်ရသေးဘဲ အဲ့ဒီနေရာမှာအလုပ်သမားအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပုလိပ်တွေအတွက် သီးနှံစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်ယာခင်းဖြစ်တယ်။ထောင်အုတ်ရိုး၂ထပ်နဲ့အိပ်ဆောင်တွေကိုဆောက်လုပ်တာဟာ ၄နှစ်နီးပါးကြာတယ်။
အုတ်ရိုးကြီးတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါ အုတ်ရိုးနံရံကြီးကို မြေနီရောင်ဆေးသုတ်ခဲ့တယ်။အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ကြီးဟာ အင်းစိန် လှိုင်းမြစ်သွား ကမ်းနားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ထောင်ဝင်းတစ်ခုလုံး စုစုပေါင်းအကျယ်အ၀န်းမြေဧရိယာဟာ ၁၆၅.၇၆၈ဧကရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအကျယ်အ၀န်းမှာ တွဲဘက်ဧရိယာအကျယ်အ၀န်းဟာ ၁၄.၇၂၉ဧကရှိပြီး အမှု့ ထမ်းနေအိမ်တွေ၊စိုက်ပျိုးခင်းမြေဧရိယာ ၄၆.၂၉၃ စတဲ့ ဒါတွေအားလုံးကိုနုတ်လိုက်ပါက အင်းစိန်ထောင် ရဲ့ မြေဧရိယာထောင်သီးသန့်အကျယ်ဟာ ၁၀၄.၇၄၆ဧက ရှိပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်တည်ရှိပုံဟာ အင်းစိန်လှိုင်မြစ်ကမ်းနားလမ်းကိုမျက်နှာပြု တည်ဆောက်ထားပြီး လမ်းဘေးကထောင်ခြံစည်းရိုးက ကပ်လျက်ရှိပြီးလမ်းမကနေ အတွင်းထောင်ဘူးဝ မျက်နှာစာအထိ ပေပေါင်း၁၁၆၀ပေကွာဝေးပါတယ်။ဗြိတိသျှအစိုးရဟာ အင်းစိန်ထောင်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးရဲ့ အခြားသောမြို့တွေမှာပါအကျဉ်းထောင်အချို့ကိုတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်နေတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင်ကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကျ စနစ်တကျပုံစံရေးဆွဲပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ကိုအပေါ်ကနေ စီးပြီးကြည့်ရင်ရှေးဟောင်းတိုင်ကပ်နာရီပုံသဏ္ဍန်ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ရိုး၂ထပ်ရှိပြီးအပြင်အုတ်ရိုးက ၁၈ပေမြင့်တယ်။
အတွင်းအုတ်ရိုးက၇ပေမြင့်တယ်။အတွင်းအုတ်ရိုးနဲ့အပြင်အုတ်ရိုးကြား ပေ၁၉၀ကွာထားတယ်။နာရီအထိုင်အကွက်ထဲမှာ ထောင့်၁၆ထောင့်ရှိပါတယ်။နာရီဒိုင်ကွက်ပုံစံထဲမှာ အကျဉ်းသားအိပ်ဆောင် အဆောက်အဦးတွေကို အကွက်ချပြီး ၂ထပ်ပုံစံစနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားတယ်။အိပ်ဆောင်တွေရဲ့ အလယ် ကွက်လပ်ဗဟိုမှာ ၆၃ပေမြင့်တဲ့ ဗဟိုမျှော်စဉ်တစ်ခုရှိပြီး အဲ့ဒီမျှော်စဉ်ကိုပတ်ပြီး စားဖိုဆောင်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ထားတယ်။
အဲဒီမျှော်စဉ်ကို ဗဟိုပြု ပြီး၂ထပ်အိပ်ဆောင်များကို နာရီလက်တံသဖွယ် ပတ်ဝိုင်းပြီးဆောက်လုပ်ထားတယ်။ရည်ရွယ်ချက်က အကျဉ်းသား၊အချုပ်သားတွေထမင်းစားသောက်ချိန်မှာ အိပ်ဆောင်တွေကနေ တစ်ဆောင်ချင်းတန်းစီထွက်ပြီး ဖိုဝိုင်းကြီးမှာ ထမင်းပုံစံတွေကို အလွယ်တကူယူနိုင်ကြစေဖို့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရည်ရွယ်ချက်က အိပ်ဆောင်တွေပေါ်မှာ ရန်ဖြစ်ခြင်း၊အုတ်ရိုးကျော်၍ထွက်ပြေးခြင်း စတဲ့လုံခြုံ ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလည်းမျှော်စဉ်ပေါ်က တာဝန်ကျအစောင့်က အားလုံးကိုမြင်နိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်အရှေ့ ဘူးဝတံခါးကြီးကနေ ဖိုကြီးဗဟိုမျှော်စဉ်အထိတစ်ဖြောင့်တည်းလမ်းဖောက်ထားပြီးအဲ့ဒီမျှော်စဉ်ကြီးကိုပတ်ပြီးထောင်အနောက်ဘက်တံခါးအထိ လမ်းကို တောင်မြောက်တစ်တန်းတည်းဖောက်ထားတယ်။လမ်းမကြီးရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလည်း၉ပေမြင့်တဲ့အုတ်တံတိုင်းကာရံထားပြီးအုတ်တံတိုင်းအရှေ့ဘက်တစ်လျှောက်မှာ အဆောက်အဦး၎ခုရှိပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား ၇ပေအုတ်နံရံတွေကန့်ပြီးကာရံထားတယ်။အင်းစိန်ထောင်တည်ဆောက်ချိန်မှာ အစိုးရဟာ သူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းမြို့တွေဖြစ်တဲ့ စစ်တွေ၊မော်လမြိုင်၊မြိတ်၊ပုသိမ်နဲ့ရန်ကုန်စတဲ့ မြို့တွေမှာထောင်တွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ရာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့၁၂ကွာဝေးတဲ့အင်းစိန်မြို့မှာ ထောင်ကြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တပြု ပြင်ရေး Reformation အတွက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတယ်။ဒါကြောင့်အင်းစိန်ထောင်ကြီးကို ၁၈၉၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်အသုံးပြု
အဲ့ဒီတုန်းက အင်းစိန်ထောင်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာ ခဲ့ပါတယ်။ရာဇ၀တ်မှု့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာကျူးလွန်တဲ့ အကျဉ်းသား(Causal Prisoner) ၊ရာဇ၀တ်မှု့ ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးကျူးလွန်တဲ့အကျဉ်းသား(Habitual Prisoner) နဲ့ တရားမအကျဉ်းသား(Civial prisoner) တို့ကိုထားရှိစေခဲ့တယ်။
အင်းစိန်ထောင်စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ အကျဉ်းဌာနမင်းကြီးအဖြစ် ပထမဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့သူဟာ Surgeon. Licut Colonel Davicisno ဖြစ်ပါတယ်။၁၉၄၂အင်္ဂလိပ်တပ်တွေမြန်မာပြည်ကဆုတ်ခွာပြီးဂျပန်တွေအုတ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်တွေကို ဂျပန်တွေကလက်နက်တိုက်အဖြစ်အသုံးပြု ခဲ့တယ်။ဂျပန်တွေထွက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ပြန်အ၀င် ၁၉၄၆ခုနှစ်မှာတော့ အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်အသုံးပြု ပြန်တယ်။
၁၉၄၈မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်ဦးမှာ ကရင်တွေကအင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ကို အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာအကျဉ်းထောင်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးအကျဉ်းသားအားလုံးကို
လွှတ်ပေးလိုက်ကာ အင်းစိန်ထောင်ကိုခံတပ်သဖွယ်အသုံးပြု ခဲ့ပြန်တယ်။နောက်ပိုင်းရန်ကုန်ထောင်မှာအချုပ်သားနဲ့ပြစ်ဒဏ်၆လအောက် အကျဉ်းသားတွေကိုသာထားပြီး နှစ်ကြီးအကျဉ်းသားအားလုံးကို အင်းစိန်ထောင်သို့ပေးပို့ကာ ထိန်းသိမ်းစေခဲ့တယ်။အင်းစိန်ထောင်ဟာ အကျဉ်းဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးဗဟိုအကျဉ်းထောင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အင်္ဂလိပ်ထောင်လက်စွဲစာအုပ်အရ အကျဉ်းသားအင်အား အယောက် ၅၀၀၀ကိုသာ လက်ခံထိန်းသိမ်းဖို့သတ်မှတ်ထားသော်လည်း မဆလခေတ်နဲ့ စစ်တပ်မင်းဆက်ခေတ်တွေမှာ အဖမ်းအဆီးရက်စက်ခဲ့တဲ့အတွက် လက်ရှိအခြေနေအရ အကျဉ်းသား၁သောင်းခွဲနီးပါး ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အကျဉ်းထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၂ ဦးနေ၀င်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် အရေးခင်းဆန္ဒပြမှု့ တွေမှာပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ စံမြန်းရာ အင်းစိန်တောရဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာပြစ်မှု့ မှာမကျူးလွန်တဲ့အပြင် အပ်တိုတစ်ချောင်းမပါတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ အင်းစိန်တောရ (ကျောင်းသားများပေးထားသောအမည်)မှာ အင်္ဂလိပ်အရှင်သခင် ၊မြန်မာတွေပြောပြောနေတဲ့ မဟာဂုတ်သွေးစုပ်သူ၊ သွေးခွဲသမား၊ပြည်ပရန် စတဲ့ဝေါဟာရတွေရဲ့ ပိုင်ရှင် အင်္ဂလိပ်တွေကတောင် မလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်မတန်ရက်စက်တဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် နှစ်၃၀၊နှစ်၅၀ဆိုတာတွေ၊ အင်မတန်ကြမ်းတမ်းပြီးတိရိစ္ဆာန်တောင်မစားတဲ့အစားစာတွေကိုကျွေးပြီး နိုင်ငံရေးသမား ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို နှိပ်စက်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ မကြားဖူးသမျှသော အကြောင်းအရာနဲ့ရက်စက်မှု့ အပေါင်းသရဖူဆောင်းစေခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်အားလုံးဟာ အမျိုးသားဖက်ဆစ်တွေရဲ့ လက်ထက်မှာသာဖြစ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
Credit; people voice
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ဖူးတဲ့ ကျိကျိတက်ချမ်းသာတဲ့ ဆယ်လီများ
April 19, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
ဆယ်လီအများအပြားဟာ အရမ်းဆင်းရဲတဲ့ ဘဝကနေ လာခဲ့တာပါ။ အိမ်သေးသေးလေးထဲမှာ အပူပေးစနစ်မရှိ၊ စားစရာမရှိတဲ့ ဘဝမျိုးမှာ နေခဲ့ရတဲ့ ဆယ်လီတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် နေစရာတောင် မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီဘဝကနေ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီတွေ ဖြစ်တဲ့အထိ ကြိုးစားခဲ့သူတွေပါ။
အာနိုးကို ကလေးကအစ သိပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူက သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ အာနိုးဟာ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ကာယဗလမောင်ပြိုင်ပွဲတွေ အများကြီး ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူဘဝက အရာအားလုံး ပန်းခင်းလမ်းဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာနိုးဟာ သြစတြီးယားမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက် အမေရိကကို ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူ အမေရိကကို ရောက်ချိန်မှာ နာမည်တစ်လုံးကလွဲလို့ ဘာမှ ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကံလေးနည်းနည်းကောင်းလာချိန်မှာ ပန်းရံအလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း ဝင်ငွေနည်းနည်းရလာပြီး ကာယဗလမောင် ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်လို့ အနိုင်ရလာရာကနေ သရုပ်ဆောင်လောကထဲ ဝင်ရောက်လာသူပါ။ ကြွက်သေတစ်ကောင် အရင်းပြုရင်း ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ အာနိုးရဲ့ ဘဝလိုမျိုးပါပဲ။
ဟောလိဝုဒ် အကယ်ဒမီဆုရှင် ဟီလာရီဆွန်း အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ အယ်လ်အေမှာ သူမရဲ့မိခင်နဲ့အတူ ကားထဲမှာ နေခဲ့တာပါ။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကလည်း ဝါရှင်တန်မှာ သူမနဲ့ သူမမိသားစုဟာ နောက်တွဲယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့ဖူးပါတယ်။ လှပပြီး ပါရမီရှိတဲ့ မင်းသမီးဟာ ကံကောင်းလာတဲ့တစ်ချက် အခွင့်အရေးကို ဆုပ်ကိုင်လို့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ The Next Karate Kid ဇာတ်ကားနဲ့ အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ချမ်းသာရုံတင်မကဘဲ နာမည်ကြီး တင်းနစ်သမားဟောင်း ရူဘန်တောရက်စ်နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လမှာ စေ့စပ်လိုက်ပါတယ်။ အယ်လ်အေမှာ ကားထဲနေခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ့ အခု သူမဘဝက မိုးနဲ့မြေလို ကွာခြားနေပါပြီ။
ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမရှိဘဲ ကလေး ၁၅ ယောက်ရှိနေတဲ့ ဘဝကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဆလင်းဒီယွန်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ သူတို့ရဲ့ သားသမီး ၁၅ ယောက်ကို ဂီတကလွဲလို့ ပေးစရာ ဘာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘဝက ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပေမဲ့ သူတို့မိသားစုဟာ အတူလက်တွဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဆလင်းဒီယွန်ရဲ့ အသံက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အရမ်းကို ကောင်းနေခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ပထမဆုံး အယ်လ်ဘမ်ကို ထုတ်ချိန်မှာ သူမအသက် ၁၄ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အခုတော့ သူမဟာ သူမရဲ့မိသားစုတစ်စုလုံးကို စောင့်ရှောက်နိုင်လောက်အောင် ချမ်းသာနေပါပြီ။ အခုဆိုရင် အကောင်းဆုံး အယ်လ်ဘမ်ဆု အကြိမ်ကြိမ်ရပြီး လက်စ်ဗီးဂက်စ်မှာ ရှိုးပွဲ ပုံမှန် လုပ်နေတဲ့ ဆလင်းဒီယွန်အတွက် ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီတစ်သက် စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ရက်ပါ အီမီနမ်ဟာ ဆင်းရဲချို့တဲ့စွာ ကြီးပြင်းခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ Eight Mile ဟာဆိုရင် သူနဲ့ သူ့မိသားစု ဒက်ထရိုက်မှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနေထိုင်ခဲ့ရတာကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာနေတုန်းက နောက်တွဲယဉ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့အမေနဲ့အတူ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူနဲ့ သူ့ဇနီးဟာ သမီးလေးကို သူတို့ထက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝ ရရှိစေဖို့ မနားမနေ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ သူ့ရဲ့ အနုပညာပါရမီက သူ့ကို အခက်အခဲတွေကြားက ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် အီမီနမ်ဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်နေပြီလို့ ပြောကြတယ်။
ဟာသမင်းသား ဂျင်မ်ကာရေးဟာ အခုဆိုရင် မမှန်းဆနိုင်လောက်အောင် ချမ်းသာနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်များစွာက အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငွေကန်ထဲမှာ လက်ပစ်ကူးလို့တောင် ရနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ သူ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို သူ့မိဘတွေနဲ့အတူ ဗင်န်ကားတစ်စီးထဲမှာ နေထိုင်ရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့တာပါ။ မိသားစုရဲ့ အဓိကဝင်ငွေကို ရှာဖွေပေးတဲ့ သူ့ရဲ့ဖခင် အလုပ်ပြုတ်သွားပြီးတဲ့နောက် သူတို့မှာ အိမ်ကအစ အားလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ကာရေးဟာ မိသားစုကို ကူညီဖို့အတွက် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်လောကထဲ ဝင်ရောက်ပြီး အောင်မြင်လာပါတယ်။ ဂျင်မ်ကာရေးက အခုထိ အောင်မြင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားသစ် ၂ ကား ထပ်ထွက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
၆။ လီယိုနာဒို ဒီကက်ပရီယို
ဟောလိဝုဒ်မှာ ကြီးပြင်းတယ်လို့ ကြားရတာ သဘောကျစရာကောင်းပေမဲ့ ဟောလိဝုဒ်မှာ ဘယ်လိုရှင်သန်ရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပါသေးတယ်။ ဟောလိဝုဒ်မှာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ဘဝတွေနဲ့ ဥပဒေမဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေရှိပါတယ်။ လီယိုနာဒိုကတော့ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ သူဟာ ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ ရာဇဝတ်မှုပြည့်နှက်နေတဲ့ အပိုင်းမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် လီယိုဟာ ဒီနှစ်မှာ ပထမဆုံးရရှိတဲ့ အော်စကာဆုအပါအဝင် ဆုပေါင်း ၈၀ ခန့် ရရှိထားပြီးပါပြီ။ ဆုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အတွက် ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ လီယိုနာဒို ဒီကက်ပရီယိုဟာ အခုဆိုရင် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်နေတာ အံ့သြစရာ မရှိပါဘူး။
သူမမိခင်က သူမကို ကောလိပ်တက်စေချင်ပြီး သူမကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကသမားတစ်ဦးဖြစ်ချင်တာကြောင့် မိခင်နဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဂျေလိုဟာ အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကော်အထည်ဖော်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ဂျေလိုဟာ လက်ထဲမှာ ငွေလည်း သိပ်မရှိသလို နေစရာ နေရာလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝနဲ့ အကခန်းမထဲက ခုံတန်းလျားတစ်ခုမှာ နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ သူမဟာ နေစရာအိမ်မရှိတဲ့ဘဝမှာ အကြာကြီး မနေခဲ့ရဘဲ ဥရောပမှာ သူမရဲ့ ပထမဆုံး ကပွဲကို တင်ဆက်ခဲ့ရပြီး မကြာခင်မှာပဲ In Living Color ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းက တဟုန်ထိုး အောင်မြင်လာပြီး မင်းသမီး၊ အကမယ်နဲ့ အဆိုတော် အဖြစ် ကျော်ကြားလာပါတယ်။ အခုတော့ သူမမိခင်ဟာ သူမရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက် ဝမ်းသာနေမှာ သေချာပါတယ်။
တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာစေမည့် နည်းလမ်းများ
April 18, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် တစ်ဘ၀လုံးကို သတိပြုဆင်ခြင်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ အခုကစပြီး အချိန် (၁)မိနစ်အတွင်းမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်စေဖို့ နည်းလမ်း(၂၁)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ HDL ကိုလက်စထရောဓာတ်မြင့်တက်စေမည့် စားစရာများစားပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ တစ်နေ့ကို အငံမပါတဲ့ သီဟိုဠ်သရက်စေ့ ၂/၃ အောင်စလောက်စားပေးမယ်ဆိုရင် (၄)ပတ်အကြာမှာ High Density Lipoprotein အမည်ရ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ကိုလက်စတရောဓာတ် (၆)ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂။ သွားကို အခြောက်တိုက်ပါ။
သွားတိုက်တံမှာ သွားတိုက်ဆေးမထည့်ပဲ သင့်ရဲ့သွားတွေကို ခြောက်သွေ့နေတဲ့သွားတိုက်တံနဲ့ စက္ကန့်(၃၀)လောက် တိုက်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက သွားချေးတွေကို ပြောင်စေနိုင်ပြီး သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ နူးညံ့တဲ့သွားတိုက်တံအခြောက်ကို သုံးပြီး သွားတွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို အရင်တိုက်ပါ။ ပြီးမှ အပြင်ဖက်ကိုတိုက်ပါ။ ပလုပ်ကျင်းပါ။ ပုံမှန်အတိုင်း သွားတိုက်ဆေးနဲ့ တိုက်ပါ။
၃။ နားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။
အသက်ကြီးပြီး အဖိုးအဖွားအရွယ်ရောက်တဲ့အထိ နား အကြားအာရုံတွေကောင်းနေချင်တယ်ဆိုရင် တေးဂီတနဲ့ နားကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပထမဆုံး အသံအတိုးအကျယ်ကို သာမန်ကြားနိုင်ရုံလာက်သာ ထားရှိပါ။ ပြီးရင် ကြားနေရတဲ့ ဂီတသံစဉ်တွေထဲက တူရိယာသံတစ်ခုထဲကိုပဲ အာရုံစိုက်နားထောင်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက နေ့စဉ်နဲ့အမျှအသံတွေကို အသေးစိတ်ကြားသိနိုင်စွမ်းရှိလာအောင် ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာတဲ့အခါမှာ လန်းဆန်းသွားစေဖို့ ကော်ဖီမသောက်ပါနဲ့။ သံပုရာအရသာ ဆိုဒါရည် တစ်ခုခု သုံးဆောင်ပြီး စွမ်းအားဖြည့်ပါ။
၅။ နေ့လည်စာ ဘာစားလဲ မှတ်ထားပါ။
နေ့လည်စာကို ဘာတွေစားခဲ့လဲဆိုတာကို မှတ်မိနေတာက ညနေပိုင်းမှာ အခြားသရေစာတွေစားချင်စိတ်ကို လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်မဟုတ်ပဲတစ်ခုခုစားချင်လာရင် မနက်စာ ဒါမှမဟုတ် နေ့လည်စာ ကို ဘာနဲ့စားခဲ့လည်း ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါ။
၆။ အနမ်းတွေနဲ့ ညှို့ငင်ပါ။
ချစ်သူကို အနမ်းမပေးခင်မှာ သင့်နှုတ်ခမ်းတွေကို ပူရှိန်းအဆီတစ်မျိုးမျိုးသုတ်လမ်းထားမယ်ဆိုရင် အထိအတွေ့နဲ့ အနံ့အရသာကောင်းကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပူရှိန်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး ၀င်လေထွက်လေနွေးနွေးနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်ကိုယ်လုံးကို စိတ်ကြွလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ မကောင်းတဲ့အတွေးများ ရှင်းထုတ်ပါ။
အလိုလိုမကောင်းမြင်နေတတ်တဲ့ အတွေးတွေက စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုကို ဖြစ်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထွက်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခု ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ချရေးလိုက်ပြီး မေ့ပစ်လိုက်ပါ။ နောက်မှ ဒီအတွေးတွေ ဘယ်ကလာလဲဆိုတာကို ပြန်ဆန်းစစ်ပြီး အတွေးမှန်အောင်ပြင်ဆင်ပါ။
၈။ ကြင်ဖက်ကို ချီးကျူးပါ။
အိမ်ထောင်ရေးမသာယာမှုက နာမကျန်းဖြစ်နိုင်ချေ (၃၅)ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာစေနိုင်ပြီး သက်တမ်း(၄)နှစ် တိုသွားစေနိုင်ပါတယ်။ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့က သင့်ရဲ့ကြင်ဖက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ချီးကျူးစကားပြောပေးရုံပါပဲ။
၉။ ပါးပါးလှီးပါ၊ နည်းနည်းစားပါ။
စားစရာတွေကို အတုံးလိုက်မလှီးပဲနဲ့ အချပ်လိုက်ပါးပါးလှီးတာက နည်းနည်းစားရုံနဲ့ တင်းတိမ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အချပ်လိုက်ပါးပါးလှီးထားတာက စားစရာတွေကို ပိုကြီးတယ်လို့ ထင်ရစေပြီး သိပ်မစားရပဲနဲ့ ၀သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဆေးသောက်လွယ်အောင် လုပ်ပါ။
အရသာဆိုးတဲ့ ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးရမယ်ဆိုရင် မသောက်ခင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက်မှာ ရေခဲတုံးလေးတစ်ခုကို ငုံထားလိုက်ပါ။ ရေခဲရဲ့အအေးဓာတ်က အရသာကို မသိအောင် ခေတ္တလုပ်ထားပေးနိုင်တာကြောင့် အလွယ်တကူဆေးသောက်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ခေါင်းကိုက်တာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပါ။
ခေါင်းကိုက်နေပါသလား။ ibuprofen ဆေးသောက်ပြီး ကဖင်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ လက်ဖက်ရည် ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီတစ်ခုခုထပ်သောက်လိုက်ပါ။ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို မြန်မြန်ပျောက်ကင်းသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်သောက်မယ့်အစား လိမ္မော်သီးစားပါ။ အသီးဖျော်ရည်တွေ သောက်သုံးမယ့်အစား အသီးတစ်ခုလုံးကို စားပါ။ ဒီလိုဝါးစားရတာက တင်းတိမ်မှုကဖြစ်စေနိုင်ပြီး စားလိုက်တဲ့အစာတွေကို ချေဖျက်ဖို့ အချိန်ပိုယူရတာကြောင့် ဗိုက်မဆာပဲအချိန်ကြာကြာနေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချဉ်တဲ့အရသာရှိတဲ့ စားစရာတွေမှာ acetic acid ဓာတ်များတာကြောင့် ကစီဓာတ်တွေကို ပြိုကွဲစေပြီး သွေးအတွင်းသကြားဓာတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ ခေါင်းအုံးကို လဲလှယ်ပါ။
သင့်ခေါင်းအုံးကို ခေါက်ချိုးချိုးပြီး လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြန်ကန်ထွက်လာမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ခေါက်လျက်သားပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းအုံးအသစ်လဲပါ။ ဒီခေါင်းအုံကို အိပ်တဲ့အခါမှာ သင့်ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းကို အဆင်ပြေအောင် ခုထားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၅။ ကားမောင်းရင် ခါးမနာအောင်
ကားအကြာကြီးမောင်းရတဲ့အတွက် ခါးမနာရအောင် နောက်ကြည့်မှန်ကို အပေါ်နည်းနည်းထောင်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ခပ်လျှောလျှောထိုင်မိတော့မှာမဟုတ်ပဲ နောက်ကားကိုမြင်ရဖို့ မတ်မတ်ပဲထိုင်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၆။ လက်ဖက်ရည်ကို အချဉ်ညစ်သောက်ပါ။
လက်ဖက်ခြောက်ခပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်(ရေနွေးကြမ်း)အအေးပဲဖြစ်ဖြစ် အပူပဲဖြစ်ဖြစ် သောက်တဲ့အခါမှာ သံပုရာရည်ညစ်သောက်ပါ။ သံပုရာသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်က လက်ဖက်စိမ်းမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင့်ပစ္စည်းတွေကို ပိုထွက်လာစေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇။ ထမင်းစားပွဲမှာ ပန်းအိုးထိုးပါ။
အထူးသဖြင့် မနက်စားစားသောက်တဲ့အချိန်မှာ ဒေစီပန်း၊ ကျူးလစ်ပန်း၊ နှင်းဆီပန်းနဲ့ အခြားပန်းတွေကို ပန်းအိုးတစ်ခုနဲ့ ထိုးထားတာက ခံစားမှုကို ကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ လန်းဆန်းလှပတဲ့ ပန်းတွေကို တွေ့မြင်ရတာက လူတွေကို ပိုပြီးပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေပြီး ခွန်အားပြည့်ဝစေနိုင်ပါတယ်။
၁၈။ ပိုးမွှားတွေကို ရှင်းထုတ်ပါ။
သင့်မီးဖိုခန်းထဲက ပန်းကန်ဆေးရေမြုပ်ဖတ်မှာ ဘက်တီးရီးယာသန်းပေါင်းများစွာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေထိုင်ပါတယ်။ စိုစွတ်မှုနဲ့ အစားအသောက်အစအနတွေကြောင့် အီးကိုလိုင်လို ပိုးမွှားတွေ များစွာပေါက်ဖွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေမြုပ်ဖတ်တွေကို မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုထဲ စက္ကန့်(၃၀)လောက် အပူပေးတာ ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးဆူဆူနဲ့ (၅)မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီး ပိုးမွှားတွေကို ရှင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။
၁၉။ ဗီတာမင် G မှီဝဲပါ။
ဗီတာမင် G ဆိုတာ သင့်ရဲ့စိတ်သဘောထားကို ပြုပြင်တတ်ဖို့ ဆိုလိုတာပါ။ လက်ရှိဘ၀ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကျေနပ်နိုင်တာက စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ပါးစေပြီး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိကျန်းမာရေး၊ စားစရာ၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ စသဖြင့် အားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကျေးဇူးသိတတ်ပါစေ။
၂၀။ အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ပါ။
အိပ်ပျော်သွားဖို့ ခက်နေပါသလား။ ခြေအိတ်တွေ လက်အိတ်တွေ စွပ်ထားလိုက်ပါ။ လေ့လာမှုတွေအရ ခြေတွေ လက်တွေ နွေးထွေးနေရင် အမြန်ဆုံးအိပ်ပျော်သွားစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခြေတွေ လက်တွေ နွေးနေတာက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း အပူချိန်ကို လျော့ကျသွားစေနိုင်တာကြောင့် ပုံမှန်အိပ်ပျော်ဖို့ ကြာချိန်ထက် ထက်ဝက်လောက်လျော့နည်းပြီး အိပ်ပျော်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခု ချခါနီးမှာ နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေကို အချိန်(၁)မိနစ်လောက်ယူပြီး စဉ်းစားပါ။ ၀ိုင်နောက်တစ်ခွက်သောက်ဖို့၊ အလုပ်ကနေထွက်ဖို့၊ ဆေးတစ်လုံးမျိုချဖို့ကနေစပြီး ကလေးကို အော်ဖို့အထိ တစ်ခုခုလုပ်ခါနီးတိုင်းမှာ တစ်မိနစ်စောင့်ပြီး စဉ်းစားပါ။
အောင်မြင်ချင်ပါသလား?? သူတို့ကို နားမထောင်ပါနဲ့
အောငျမွငျခငျြပါသလား?? သူတို့ကို နားမထောငျပါနဲ့
တစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ အတိုင်ပင်ခံတွေထားပြီး ဒေါ်လာ သောင်းပေါင်းများစွာ သုံးပြီးတော့ သူတို့ပြောတဲ့ ” အောင်မြင်မှု လမ်းမှန်” ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က တခြားသူတွေ သွားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြတာပါ။ တခြားသူတွေလို ကြော်ငြာပါတယ်။ တခြားသူတွေလို အဝတ်အစား ကောင်းကောင်း ဝတ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေလို Marketing လုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်မှာတော့ သူတို့နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လုပ်ခဲ့တာကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါဟာ ကျွန်တော့်နည်းလမ်း မဟုတ်လို့ပါပဲ။
တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို အောင်မြင်အောင် ဘာလုပ်ရမယ်၊ ညာလုပ်ရမယ် ပြောလာရင် သူတို့ကို ပါးစပ်ပိတ်နေခိုင်းလိုက်ပါ။ သင်က သင့်သမိုင်း သင်ရေးနေတာပါ။ သင်က သင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ခေတ်မှာ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပွား အဖြစ်မခံပါနဲ့။
သင်က ဘယ်သူလဲ? သင် ဘာလုပ်ချင်တာလဲ? ဘယ်နေရာကို သွားချင်တာလဲ? သင့်ပန်းတိုင်က ဘာလဲ? အဲ့ဒိအချက်အလက်တွေနဲ့ အကြံပေးသူတွေ သင့်ကို ပြောပြတဲ့ အောင်မြင်မှု ပုံပြင်တွေနဲ့ ဘယ်လောက် ဆက်စပ်နေသလဲ? ဖြေကြည့်ပါ။
ကျွန်တော့်အတွက်ဆို ကျွန်တော် စီးပွားရေး လုပ်သမျှဟာ ကျွန်တော့်ကို ကျေနပ်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက် သုံးခုကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ့်ငွေ ကိုယ်ရှာနိုင်တဲ့ စွမ်းအား ရှိတယ်၊ စီးပွားရေး ကြီးထွားလာမယ်၊ အဲဒီလို ကြီးထွားလာတာ ကြည့်ရတာ ပျော်တယ် တို့ပါပဲ။ အဲဒိအချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော် သွားချင်တဲ့နေရာကို ဆုံးဖြတ်တာပါ။ အဲဒိအချက် သုံးချက်ထဲက နှစ်ချက် ကိုက်ညီနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆို ကျွန်တော် လုပ်ပါတယ်။ တစ်ချက်ထဲ ကိုက်ရုံနဲ့ ငွေဘယ်လောက် ရရ မလုပ်ပါဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် သင့်ကို ဘာကပျော်စေလဲ ဆိုတာကို သိအောင် ရှာပြီး သင်ကိုယ်တိုင် စိတ်ကျေနပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ထုတ်ပါ။ အဲဒါက ဘာကြောင့် အရေးကြီးလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ကျွန်တော့်ရဲ့ အချက် သုံးချင်နဲ့ မကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်မိတိုင်း အရှုံးနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရလို့ပါ။
သင် ရောင်းနေတာ ဘာလဲ?? လူတိုင်းဟာ တစ်စုံတစ်ခုတော့ ရောင်းနေတာချည်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရောင်းနိုင်တဲ့ထဲက အကောင်းဆုံး အရာကတော့ သင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ပိုပြီး သမိုင်း အရှိန်အဝါ ကြီးကြီး မားမားနဲ့ ရောင်းဖို့ပါပဲ။
Domino ဟာ ပီဇာ မရောင်းပါဘူး။ ဆာနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ ပင်ပန်းနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် အမြန်စာ ရောင်းတာပါ။ Apple က ရောင်းနေတာ စမတ်ဖုန်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေး အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပိုဝင်ြ့ကွားစေမယ့် ပန်းသီးတံဆိပ် ရောင်းတာပါ။
ကျွန်တော့်နည်းလမ်းဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်သမိုင်းကို ရေးနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော် ရေးချင်တာကို ရေးနေတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကို တားမြစ်နေတဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာက ပါတ်ဝန်းကျင်က ပြောနေကြတဲ့ ” ဒီလိုမလုပ်နဲ့၊ ဟိုလူတောင် ဟိုလိုလုပ်လို့ ချမ်းသာတာ၊ ဟိုလိုလုပ်ပါလား” ဆိုတဲ့ စကားတွေပါပဲ။ အဲ့ဒိ စကားတွေကိုသင့်စီးပွားရေးကို သင့်ဘာသာ ပုံစံသစ် တည်ထောင်ခြင်းကနေ တားဆီးခွင့် မပေးလိုက်ပါနဲ့။
ဒကာ မောင်စိန်ဟာ ဝက်သတ်ပြီးအသက်မွေးတယ် တစ်နေ့တော့ သူ့ဒကာမကြီးက စဉ်းစားတယ် သူ့ယောက်ျားဟာ ဝက်သတ်ပြီး အသက်မွေးလာတာ အသက်တွေလည်း ကြီးလာပြီ။ ဒီတိုင်းသာ သေရင် မြေကြီးလက်ခတ်ရင်သာ လွဲမယ်, ငါ့ယောက်ျားတော့ ငရဲကျမှာ သေချာနေပြီ။အဲဒီအချိန် သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပေါ်ထွန်းနေတော့ ဆရာတော်ကြီးဆီမှာ အပါယ်လေးဘုံ လွတ်တဲ့တရား သွားတောင်းမှပဲဆိုပြီး ဆရာတော်ကြီးဆီ လင်မယားနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ် ..
တရားထိုင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ မောင်စိန်ဟာနာရီဝက်လောက်လည်း ရှိရော တခါတည်းဝေဒနာတွေ တက်လာတယ် ဝေဒနာတွေက ပြင်းတာကိုး, တစ်ကိုယ်လုံး ဓားတွေ လှံတွေ အထိုးခံရသလိုပဲတဲ့, ဝက်တွေ ထိုးခဲ့တာကိုးဆရာတော်ကြီးက ဝဋ်ကြွေးတွေ, သံသရာမှာသွားမဆပ်နဲ့ , ခန္ဓာနဲ့ဆပ်, ဒီတရားနဲ့ ဆပ်တဲ့ ..
မောင်စိန် နာလွန်းလို့ အသံပါထွက်လာတယ် အဲဒီအသံကလည်း ဝက်တွေ သေခါနီးေ ကြာက်လန့်တကြား အော်တဲ့အသံမျိုး,
အီ အီ အီဆိုပြီးတော့ ..
အီ အီလို့ မအော်နဲ့, စိတ်ပြောင်းပေးတာ,
ဖောက်ပြန်နေတယ်, ရုပ်တရားတွေဟာ အချိန်တိုင်း
ဖောက်ပြန်နေတယ်, အီအီလို့ မအော်နဲ့,
နာမ်တရားက သွားခံစားတာ, ခံစားပြီး
ပျက်သွားတာပဲ, ခံစားပျက် ခံစားပျက်
အီအီလို့ မအော်နဲ့ ဝဋ်ကြွေးတွေ ဝဋ်ကြွေးတွေ
ဘယ်သူမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး, ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ,
ဝဋ်ကြွေးတွေ ခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီး ဒီဥာဏ်နဲ့ ဆပ် ..
အီအီလို့ မအော်နဲ့, မောင်စိန်အလကားကောင်
ဒီဝေဒနာတွေ ဖြစ်နေတယ်, မောင်စိန်ဘာမှ
လုပ်ပေးလို့မရဘူး, ငါမရှိဘူး ဝဋ်ကြွေးတွေ,
ငါမပိုင်ဘူး ဖောက်ပြန်နေတာ, ငါနဲ့ဘာမှ
ငါ့ပစ္စည်း မဟုတ်ဘူး ခံစားပြီးပျက်နေတာ
မောင်စိန်ကို တခါတည်3းရက်တိတိ တရားထိုင်ခိုင်းပါတယ် မောင်စိန် အိမ်ပြန်သွားတယ်။ မဂ်ကျတယ် ဖိုလ်ကျတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးပြောင်းသွားတာပဲ။ ငါရှိတဲ့ စိတ်ကနေ ငါမရှိဘူး,ဒီစိတ်ပြောင်းသွားတာပဲ
ငါ့ခြေ ငါ့လက် ငါ့ခေါင်း ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ စိတ်ထဲ ငါမရှိဘူး ငါမပိုင်ဘူး။ ဒီစိတ်ကလေး ပြောင်းသွားတာပဲ ..
ဒါကိုသိတော့ မောင်စိန်ဟာ သူ့အိမ်မှာ ဘာမြင်မြင် ဘာကြားကြား ဒါပဲကျက်တော့တာပဲ ငါမရှိဘူး, အချိန်တိုင်း ဖောက်ပြန်နေတာပဲ, အချိန်တိုင်း
ပျက်စီးနေတာပဲ, အချိန်တိုင်း ဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲအချိန်တိုင်း အကြောင်းအကျိုးပဲ, မောင်စိန် ဒါပဲကျက်နေတယ်, သူသိတာက ဒီစိတ်ပြောင်းသွားရင် အပါယ်လေးပါးလွတ်မယ်
ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လည်း ခေါ်ကျက်မှာပဲ, ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်လည်း ခေါ်ကျက်မှာပဲ, ဝေဒနာတွေပေါ်လည်း ခေါ်ကျက်မှာပဲ ဖောက်ပြန်တဲ့တရားမှာလည်း
ငါမပါဘူး, ခံစားတဲ့တရားမှာလည်း ငါမပါဘူး, အဲဒီငါမရှိတဲ့တရားကို သေတဲ့အထိ ကျက်သွားတယ် ..
သူသေသွားပြီ, သူ့ဒကာမကြီးက ဤသည့်စားဖွယ် အမယ်မယ်နဲ့ ဆရာတော်ကြီးဆီ သက်ပျောက်ဆွမ်းလာကပ်တယ် ..
ဘယ်သူ့အတွက်လဲတဲ့, ဒကာမောင်စိန်အတွက်ပါ ဘုရား, သူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ ဆရာတော်ဘုရားဆီ သက်ပျောက်ဆွမ်း လာကပ်တာ, ဆရာတော်ကြီးက ဘာပြောလဲဆိုတော့ မောင်စိန်အတွက်ဆို မကပ်နဲ့တော့ , မောင်စိန် နတ်ပြည်သွားပြီ,
နင်တို့ ကုသိုလ်ယူချင်ရင်တော့ ကပ်သွားတဲ့ ..
ဒကာမကြီးက ပျော်တာပေါ့, သူ့ယောက်ျား အပါယ်လေးဘုံက လွတ်သွားပြီ
ငါမရှိတဲ့စိတ်က အပါယ်လေးဘုံ သွားမယ့်ကံကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ် ..
မေးစရာရှိတာက ဝက်တွေနေ့တိုင်း သတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်,
အကောင်ပေါင်းများစွာ သတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်ပါမလား
အဲတော့ မောင်စိန်ထက်ဆိုးတဲ့ေ နာက်တစ်ယောက် ရှိသေးတယ် အဂုင်္လိမာလကြီး,လူတွေသတ်လိုက်တာ, မောင်စိန်ရော အင်္ဂုလိမာလကြီးရော
လွတ်တာက ကံကြီးငါးပါး မထိုက်ခဲ့ဘူး ..
ဘုရားသွေးစိမ်းတည်အောင် မလုပ်ခဲ့ဘူး,သံဃာသင်းမခွဲခဲ့ဘူး, အမိ အဖ မသတ်ခဲ့ဘူး,သောတာပန်စတဲ့ အရိယာတွေကို မသတ်ခဲ့ဘူး အဲဒီကံကြီးငါးပါး မထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မောင်စိန်လိုပဲ။ငါမရှိဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်
ငါမရှိတဲ့ တရားရဲ့ တန်ခိုးဟာ နတ်ပြည်သွားတာပဲ ..ဘာနဲ့ နှိုင်းပြလည်းဆိုတော့။ အလွန်တရာ ကြီးမားတဲ့ ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်, အင်းလေးကန်ထက်အဆပေါင်းများစွာ ကြီးတဲ့ရေကန်ကြီးပေါ့ အဲဒီကန်ကြီးထဲကို နှီးဖျားလေး ထိုးစိုက်ပြီြး ပန်ထုတ်လိုက်တယ် နှီးဖျားလေးမှာ ရေလေးကပ်နေတယ်
ကြီးမားတဲ့ ရေကန်ကြီးနဲ့ စာရင် မရှိသလောက်
နှိုင်းယှဉ်စရာမဟုတ်တဲ့ ရေလေးပါ ..ဆိုလိုတာက ငါ့ခြေ ငါ့လက် ငါ့ခေါင်း ငါပိုင်ဆိုင်
နေတဲ့ စိတ်ကို ရရှိထားတဲ့ ဒုက္ခဟာ
မောင်စိန်ကဲ့သို့ ငါမရှိတဲ့စိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူရဲ့
ဒုက္ခဟာ နှီးဖျားမှာ ကပ်နေတဲ့ ရေလောက်ပဲ
ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ ဒုက္ခမရှိတော့ဘူး ရဟန္တာတွေလို သန္တိသုခ မဟုတ်သေးဘူး, ကာမသုခပဲ ရသေးတဲ့ ဒုက္ခပါ ..ဆရာတော်ကြီးက ထပ်ပြီးရှင်းတယ်ေ သာတာပန်များဟာ လူ့ပြည်နတ်ပြည်
ခုနစ်ဘဝလောက်ပဲ ရှိတော့တယ် ဆရာတော်ကြီးက အရောဆိုတာကို လက်မခံဘူး။ လူ့ပြည်က နတ်ပြည်သွားလိုက်, နတ်ပြည်ကလူ့ပြည်လာလိုက် , ဒါကိုအရောခေါ်တယ် ..
အရောမဟုတ်ဘူး, ဆီဈေး ဆန်ဈေးတက်သလိုသောတာပန်လည်း ဈေးတက်တယ်တဲ့ ..အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကာယအပေါ်မှာ,ဝေဒနာအပေါ်မှာ, စိတ္တအပေါ်မှာ , ဓမ္မအပေါ်မှာ အချိန်တိုင်း ငါမရှိဘူး, ရှင်းနေတယ်,ရုပ်ပေါ်မှာလည်း ရှင်းနေတယ်, နာမ်ပေါ်မှာလည်းရှင်းနေတယ်, မကျေနပ်တာတွေ, အထင်လွဲတာတွေလွမ်းတာတွေ ဆွေးတာတွေ မုန်းတာတွေပေါ်မှာလည်း ငါမရှိဘူး, အချိန်တိုင်း ခံစားပြီးပျက်နေတာပဲ, တားမရဘူး,အကြောင်းအကျိုးတွေ, ငါမပိုင်ဘူး,ဝဋ်ကြွေးတွေပဲ ဝေဒနာပေါ်မှာလည်း ဒီတိုင်းပဲ, ဓမ္မပေါ်မှာလည်း ဒီတိုင်းပဲ ..
ငါမရှိဘူးဆိုတဲ့ တရားဟာ သူပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေပြီ, ဘယ်သူ့ကြည့်ကြည့် ငါမရှိဘူး,အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လူ့ပြည်မှာနေတဲ့အချိန် တစ်ဘဝ,နတ်ပြည်မှာ6ဘဝ, ပေါင်း7ဘဝပဲနေတော့မယ်
မောင်စိန်မရှိတော့တာ မဟုတ်ဘူး, မောင်စိန်ဈေးတက်သွားတယ် ..
မောင်စိန်ဟာ ဝက်ထိုးတဲ့ကံကြောင့် အပါယ်ဲသွားမယ့်ကံရယ်, လူ့ပြည်ကံရယ် မရှိတော့ဘူး, လူရဲ့ ပဋိသန္ဓေဆီ မလာတော့ဘူး ..
ဒါန သီလဆိုတဲ့ ကံသမားတွေ ရှိတယ် ဒါန သီလသမားတွေလည်း နတ်ပြည်သွားတယ်။နတ်တို့ရဲ့ ကာမဂုဏ်ခံစာြး့ပီး ဟိုမှာမေ့သွားပြီ, ဆက်ပြီး အားထုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ..
လူ့ပြည် ပြန်လာကြဦးမယ်, သူတို့က အရောသမား
တွေ, ကံသမားတွေက အရောသမားတွေ,
မောင်စိန်က ဥာဏ်သမား, မောင်စိန်က
ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဒီတရားကပဲ ကျော်သွားတာ,
ဒီဥာဏ်ကသာလျှင် ကျော်သွားတာပဲ …
credit … အနှိုင်းမဲ့စာတိုပေစများ
CV နဲ့Resume ဘာကွာခြားသလဲ
CV နဲ့Resume ဘာကွာခြားသလဲကျွန်တော်တို့ တွေ့ နေရတဲ့ အလုပ်ခေါ်စာတွေ မှာ တစ်ခါ တစ်ရံ CV နဲ့ လျှောက်ခိုင်းပြီး တစ်ခါ တစ်ရံ Resume နဲ့ လျှောက်ခိုင်းတာမျိုး တွေ့ ရပါတယ်..လူတော်တော်များများကတော CV နဲ့Resume ကို တူတူလို့ ထင်ပြီး တင်လိုက်ကြတာပါပဲ ..ကျွန်တော်လည်း အဲ့လို မျိုး တင်ခဲ့မိတာ တော်တော်များပါတယ်..အယင်ကဆို နားလည်ထားတာက CV ဆိုတာ British usage, Resume ဆိုတာ US usage ဆိုပြီးတောင် ထင်ထားမိတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းကျမှ CV နဲ့Resume မတူတာကို ပိုပြီးနားလည်လာပါတယ်…. CV နဲ့Resume မှာ ကွဲပြားခြားနား ချက်တော်တော် ရှိပါတယ်..တူမလို ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ မတူပါဘူး…
CURRICULUM VITAE သို့‘CV’
CV ဆိုတာ Latin စကားအရ “Course of Life” လို့ ဖွင့် ဆိုထားပါတယ်…. သူ က Professional documentation တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ အထဲမှာ CV ပိုင်ရှင် ရဲ့အချက်အလက် အသေးစိပ်ပါပါတယ်… ပုံမှန် ပြည့်စုံတဲ့ CV တစ်ခုမှာ CV ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပညာရေး၊ သင်ကြားရေး အတွေ့ အကြုံ၊ သုတေသနအတွေ့ အကြုံ၊ စာတမ်းပြုစုထားမှု၊ စာတမ်း တင်ပြထားမှု၊ ဆု၊ ဘွဲ့ ထူး များ ရရှိထားမှု၊ scholarship ထောက်ပံ့ခံရမှု စတဲ့အသေးစိပ်အချက်အလက်များပါပါတယ်…သင့် အနေနဲ့ Linkedin profile ကို သုံးပါက သတိထားမိမှာပါ… Linkedin ရဲ့format က CV format ကို ယူထားတာပါ။
RESUME ခေါ် ‘Résumé’
လူတော်တော်များများက resume လို့ ဆိုလိုက်ယင် CV လို့ ထင်ကြပါတယ်… အခုနောက်ပိုင်း company တော်တော် များများ ရဲ့HR သမားတွေက Resume စတိုင်နဲ့ ရေးထားတဲ့ အလုပ်လျှောက်လွာတွေကို ပိုပြီးသဘောကျလာပါတယ်..
Resume မှာ ပါဝင်တာကတော့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ များ ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ လျှောက်မည့် အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရည်များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါတယ်… သူ့ ကို ကြည့်လိုက်တာ နဲ့သင့် ရဲ့ အရည်အချင်း ကျွမ်းကျင်မှုများနဲ့ လျှောက်တဲ့ အလုပ်ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိကို သိနိုင်ပါတယ်…
အဓိကကွာခြားချက်များကို သိထားခြင်းဖြင့် အလုပ်ခေါ်စာကိုကြည့်ပြီး ဘာကို တင်သင့်လဲ ဆိုတာ သိရှိလာမှာပါ။
CV အသုံးပြုရမည့် နေရာများ
CV ရဲ့ သဘောသဘာဝအရ အသေးစိပ်ကျမှုကို ဦးစားပေးပါတယ်… အဲ့ဒါဆို CV ကို အဓိက လိုတဲ့အလုပ်တွေက ပညာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ များတတ်ပါတယ်..ဥပမာ professor တစ်ယောက် က university တစ်ခုမှာ လျှောက်မယ်ဆိုယင် သူ့ ရဲ့education life တစ်လျှောက် အလုပ် လုပ်နေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက် ဘာ သုတေသနတွေ လုပ်ခဲ့လဲ…ဘာ ဆုတွေ ရခဲ့လဲ..ဘယ်ကျောင်းတွေမှာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ အသေးစိပ်အချက်အလက်တွေ လိုအပ်ပါတယ်..
ကျောင်းအလုပ်တွေအပြင် CV ကို အတောင်းများတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကတော့ မိမိရဲ့ နောက်ကြောင်းကို အသေးစိပ် သိဖို့ ရာလိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်..ဥပမာ တပ်မတော်အရာရှိ၊ ရေနံတွင်း အင်ဂျင်နီယာ၊ အစိုးရ အရာရှိ။ စသည်တို့ ပါ။
အလားတူ စကော်လာရှစ်တော်တော်များများနဲ့ ကျောင်းဝင်ခွင့်တော်တော်များများက CV ကို တောင်းလေ့ ရှိပါတယ်…
Resume ကတော့ အလုပ် ရှာသူတော်တော်များများ အတွက် မရှိမဖြစ် ရှိရမယ့် အရာပဲဖြစ်ပါတယ်.. Resume မှာ သင့် ရဲ့ပညာအရည်အချင်းပါမယ်… အလုပ် အတွေ့ အကြုံပါမယ်… အဲ့ဒီ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့ အကြုံကို ဖော်ပြရာမှာ ရှိသမျှ ပညာ အရည်အချင်း အတွေ့ အကြုံများကို ဖော်ပြစရာမလိုပါ။ ကိုယ်လျှောက်မယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အရာများကို သာ ဖော်ပြရပါမယ်….အလုပ်လျှောက်သူတော်တော်များများကို Resume ကို သေချာ မရေးကြပါဘူး…အလုပ် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့resume က ပြောင်းလဲ မှု ရှိရမှာပါ…အခုအခါမှာ Resume ကို profit ကော non-profit အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ တော်တော် များများ သုံးလာကြပါတယ်…အလုပ်ရှင်တွေအနေ နဲ့ လဲ Resume ကို ပိုပြီး တောင်းဆိုလာကြပါတယ်..
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေကတော့ CV နဲ့ Resume မှာ ပါဝင်ရမယ့် အချက်တွေပါပဲ။CV တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဖွဲ့ စည်း တည်ဆောက်ပုံကွာခြားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက ပါဝင်ရမယ် အချက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
1. Name and contact information (အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ)
2. Areas of interest (မိမိ စိတ်ဝင်စားသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်)
3. Education, Thesis and Dissertations (ပညာအရည်အချင်း၊ စာတမ်းပြုစုထားပါက ပြုစုထားသော စာတမ်း)
4. Grants, Honors and Awards (ရရှိခဲ့ဘူးသော ဆုများ၊ ဘွဲ့ ထူးများ)
5. Publications and presentations (ဖြန့် ချည် ခဲ့ဘူးသော စာတမ်းများ)
6. Employments and Experience till date. (လုပ်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် အတွေ့ အကြုံများ)
7. Scholarly and Professional memberships (မင်ဘာ ၀င်ရောက်ထားသော အသင်းအဖွဲ့ များ)
8. References and Citations (though very rare) (အပေါ်မှ အချက်များကို ထောက်ခံပေးနိုင်တဲ့ အချက်အလက်များ) Resure မှာဆိုယင်တော့ CV ကဲ့သို့ အသေးစိပ် ဖော်ပြခြင်း မျိုး သိပ်မရှိတတ်ပါဘူး။ Resume တစ်ခု မှာ ပါသင့်တဲ့အချက်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
2. Education (ပညာ အရည်အချင်း)
3. Work experiences (လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ)
4. Relevant skills and expertise (လျှောက်မည့် အလုပ်အကိုင်နှင့် ပက်သက်သော ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု)
ဆူညံနေတဲ့ စာသင်ခန်းတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။သူတို့လေးစားရတဲ့ဆရာ ဝင်လာတာမို့ပါ။ဆရာ့အချိန်ဆို သာမာန်ထက် ကျောင်းသားဦးရေ ပိုများတတ်တယ်။ဆရာဟာ ကျောင်းသားဗဟိုပြု အတွေးခေါ်ဆိုင်ရာ အပြင်ဗဟုသုတလေးတွေ ပြောဆိုသင်ကြားတတ်လို့ ကျောင်းသားတွေ ပိုစိတ်ဝင်စား ပျင်းစရာ မကောင်းလို့ဖြစ်မယ်။
တခါတလေ ဆရာ့အချိန်တချို့မှာဆိုရင် text book ထဲကဟာ တစ်လုံးမှမပါ။ စဉ်းစားစရာ ပုံပြင်လေးတွေ ပြောရင်းသာ ပြီးသွားတယ်။ကဗျာလေးတွေ ဟာသလေးတွေနဲ့လည်း ကုန်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျောင်းသားတွေဟာ ဆရာကို ကြောက်လန့်မနေဘဲ ချစ်ခင်ရိုသေကြတယ်…။
ဆရာဟာ ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်တုန်းကမှတပည့်တွေလို့ မခေါ်ဘူး…။
”ဆရာနဲ့ ကျောင်းသားဆိုတာ အပြန်အလှန် သင်ကြားနေသူတွေလို့” တခါတုန်းက သူ့ခံယူချက်ကို ပြောပြဖူးတယ်။
”ဒီနေ့တော့ လူကြီးမင်းတို့ထဲက ရိုးသားပြီး စိတ်ခိုင်တဲ့သူတစ်ဦး state ပေါ်လာခဲ့ပေးဖို့ အကူညီတောင်းပါရစေ”
ဆရာစကားအဆုံးမှာ ကျောင်းသားတွေအားလုံး သဘောကျသွားတယ်။ဒီနေ့ ဆရာစာမသင်တော့မှာ သေချာပြီလေ။
”သမီးကို ကူညီခွင့်ပြုပါ ဆရာ”
ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ရှေ့ဆုံးအတန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့သွက်လက်ပြီး သတ္တိရှိပုံရတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးလက်ကလေးထောင်ပြီး ‘ထ’လာတယ်။
ဆရာအပါအဝင် အခန်းထဲက ကျောင်းသားတွေအားလုံး ကျောင်းသူလေးရဲ့ ရဲရင့်မှုကို ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်ကြတယ်…။
state ပေါ်ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသူလေးကို ဆရာဟာ မြေဖြူတောင့် ကမ်းပေးလိုက်တယ်။ အားလုံး ဆရာလုပ်သမျှကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြတယ်။
”Blackboard မှာ သမီးဘဝရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငါးဦးကို ရေးလိုက်ပါ သမီး”
သမီးစိတ်ထဲမှာ ဒီချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ ခရီးတစ်ခုထွက်ရတယ်လို့ ဆက်တွေးကြည့်ပါဦး…!”
ကျောင်းသူလေးနည်းတူ အားလုံးစိတ်ထဲမှာလည်း ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ ခရီးထွက်နေရလိုတွေးမိပြီြး ပုံးရောင်သန်းနေကြတယ်။
ခဏနေတော့ ဆရာက ဆက်ပြောတယ်။
”လမ်းမှာသမီးတို့ accident ဖြစ်တယ်ဆိုပါဆို့!အဲဒိထဲက တစ်ဦး မဖြစ်မနေ သေရမယ်ဆိုရင် သမီးဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲ”
ကျောင်းသူလေးရဲ့တအံ့တသြရေရွတ်သံနဲ့အတူအားလုံးဟာ ထိတ်လန့်တကြား ဆရာ့ကိုကြည့်မိတော့တယ်…။ထို့နောက်မှာတော့ ကျောင်းသူလေးဟာ လက်ထဲကဖြေဖြူ နဲ့
ဆိုတဲ့နေရာကိုကြက်ခြေခတ်လိုက်တယ်။ဆရာထပ်ပြောပြန်တယ်။”accident မှာ အသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံးဟာလည်း သေလုမျောပါးဒဏ်ရာရကုန်ကြတယ် ဆိုပါစို့…။
ခဏနေတော့ လူနာတင်ကား ရောက်လာတယ်။ဒါပေမယ့် ကားနဲ့မဆန့်လို့ သုံးဦးသာ သမီးအနေနဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ်ဆို ဘယ်သူ့ကို ထားရစ်ခဲ့မလဲ?”
ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးစိတ်ထဲမှာ accidentကြီးပဲ တကယ်ဖြစ်နေသလိုလို… အားလုံးရွေးချယ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေအတွက် သူတို့စိတ်တွေ နောက်ကျိရှုပ်ထွေးလာကြတယ်…။
ဆိုတဲ့နေရာကို ကြက်ခြေခတ် ထပ်ခတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျောင်းသူလေးဟာ မျက်ရည်တွေ ဝဲတတ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဟာ သူ့စကားကို ဆက်ပြောပြန်တယ်။
”သူတို့ အားလုံးဟာ အရေးပေါ်အခြေနေမို့ အသက်ကယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။မဟုတ်ရင် လမ်းပေါ်မှာတင် အသက်ဆုံးရှုံးတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ကံဆိုးချင်တော့ အရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆေးက နှစ်လုံးတည်းပဲ ပါလာတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကို
စာသင်ခန်းထဲရှိ ကျောင်းသားအားလုံး ဆို့နင့်ကုန်ကြတယ်။ ဆရာ့စကားသံဟာ သူတို့နှလုံးသားတွေကို တရစ်ရစ် ဖျစ်ညှစ်နေသလိုလို……။
”ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့……ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့………” လို့ ကျောင်းသူလေးဟာ သူမနုတ်ကလည်း တတွတ်တွတ်ရွတ် မျက်ရည်တွေကျနေရင်းက
၃။မောင်လေး ဆိုတဲ့နေရာမှာ မြေဖြူ ကိုင်ထားတဲ့ သူမလက်ကို လှုပ်ရမ်းလိုက်တယ်။
”သမီးရဲ့မောင်လေးကို ကားပေါ်မှာတင် အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။”
ကျောင်သူလေး ဆရာ့စကားကြောင့် ငိုလေပြီ။
ဆရာ့စကားသံ ထွက်လာတာကိုပင် အားလုံးစိတ်ထဲ မနှစ်မြို့တော့…။
သူတို့အားလုံးစာသင်ခန်းနဲ့ဝေးရာကို ပြေးထွက်ချင်လောက်အောင် မွန်းကြပ်နေကြပြီ။တချို့လည်း မျက်ရည်တွေစီးကျလို့…။
”ဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါ နှစ်ဦးစလုံးဟာ ချက်ချင်း ခွဲစိတ်ခန်းဝင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ခက်တာက ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ခန်းက တစ်ခုထဲရှိတယ်။ ဒီလိုဆို သမီးဘယ်သူ့ကို သေစေဖို့ ချန်ထားခဲ့ဦးမလဲ”
ကျောင်းသူလေး ရိုက်ကြီးတငင်ငိုပြီး တောင်းပန်ပေမယ့် ဆရာဟာ သူ့ခေါင်းကိုဖြေညှင်းစွာ ခါရမ်းလိုက်တယ်…!
အခန်းထဲက ကျောင်းသားတွေအားလုံး ဆရာ့ကိုမဖြစ်စဖူး နာနာကျည်းကျည်း လှမ်းကြည့်မိတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့နုတ်ကတော့ ဘာသံမှမထွက်ကြ…။
တစ်ခန်းလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးေ။ ကျာင်းသူလေး ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုသာ သူတို့ ရင်တထိတ်ထိတ် စောင့်မျှော်နေကြတယ်။
ကျောင်းသူလေးဟာ အရုပ်ကြိုးပြတ် ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။နာကြင်မှုကြောင့် သူမ မျက်လုံးများဟာ ကြောင်စီနေတယ်။အဆုံးစွန်ထိလောင်ကြွမ်းပြစ်လိုက်ရတဲ့ မီးစာလို…။Blackboard ကို အားလုံး ထိတ်လန့်တကြားလှမ်းကြည့်မိတော့
ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံး ဘယ်သူမှဆရာ့ကို မနုတ်ဆက်မိကြ……
zar ni nyunt lwin